မူဆယ် Oriental Highway (OHC) တိုးဂိတ် ဗုံးနဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရ၊ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း ျပည္တြင္းသတင္း မူဆယ် Oriental Highway (OHC) တိုးဂိတ် ဗုံးနဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရ၊ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
မူဆယ် Oriental Highway (OHC) တိုးဂိတ် ဗုံးနဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရ၊ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
မူဆယ်မြို့အဝင် Oriental Highway (OHC) တိုးဂိတ် ဗုံးနဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရလို့ တစ်ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တယ်လို့ အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။
မေလ ၁၁ ရက်နေ့ ည (၈) နာရီခွဲ အချိန်လောက်က (OHC) တိုးဂိတ်ကို ဆိုင်ကယ်စီးလာသူ (၂) ဦး က အိတ်ဖြင့် ထုတ်ထားတဲ့ ဗုံးနဲ့ လာရောက် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့တာပါ။
ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့် (OHC) တိုးဂိတ် အမိုးလန်သွားပြီး ငွေကောက်ကောင်တာ (၃) ခု မှန်ကွဲပျက်စီး ခဲ့ကာ တာဝန်ကျသူဝန်ထမ်း မျိုးထက်နိုင် (၂၁) နှစ် ဒဏ်ရာအနည်းငယ် ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်း အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုပါတယ်။
အကှမှးဖကှ အဖှဲ့အစညှးတှရှေိရာ ဒသတှကလှေေဲပှီး ကနှနှယမှှတှမှေော (မလေ ၁၀ ရကနှေ့က သှဂုတလှ ၃၁ ရကနှေ့) အထိ ပဈခတတှိုကခှိုကမှှု ရပစှဲကှောငှး တပမှတောကှ မလေ ၉ ရကနှေ့မှာ ကှညောခကှှ ထုတပှှနခှဲ့ပှီး တိုကဆှိုငစှှာ အခုလို တိုကခှိုကမှှု ဖှဈပေါလှာခဲ့တာပါ။
မူဆယှ Oriental Highway (OHC) တိုးဂိတှ ဗုံးနဲ့ တိုကခှိုကခှံရ၊ ၁ ဦး ဒဏရှာရရှိ (PHOTO – MOI)
မူဆယွ Oriental Highway (OHC) တိုးဂိတွ ဗုံးနဲ့ တိုကခွိုကခွံရ၊ ၁ ဦး ဒဏရွာရရှိ
အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေရှိရာ ဒေသတွေကလွဲပြီး ကျန်နယ်မြေတွေမှာ (မေလ ၁၀ ရက်နေ့က သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့) အထိ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲကြောင်း တပ်မတော်က မေလ ၉ ရက်နေ့မှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး တိုက်ဆိုင်စွာ အခုလို တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။
Bomb attack on Muse (OHC) Toll Gate One injured
One person was injured inabomb blast at the Oriental Highway Co., Ltd, Muse Toll Gate in Muse.
The explosion occurred when two motorcyclists attacked the OHC gate at 8:30 pm on May 11, whenabomb exploded.
The blast caused the OHC toe roof to collapse and three billboards were damaged and some 21-year-old workers were injured, according toagovernment statement.
The army announced on May9that the fighting had stopped in the rest of the region, except for areas of terrorist organizations.
Previous articleShambala (2012)
Next articleမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး (Satellite) ဂြိုဟ်တု ဂျပန် အကူအညီနဲ့ ၂၀၂၁ မှာ လွှတ်တင်မယ်